MMM, Mapar, Monima, Marina, Mamimad : « Tsy ara-dalana ny voka-pifidianana loholona » | NewsMada
MMM, Mapar, Monima, Marina, Mamimad : « Tsy ara-dalana ny voka-pifidianana loholona »
Tsy mbola nifarana eo. Nitondra ny heviny taorian’ny nanambaran’ny HCC ny voka-pifidianana ireo antoko sy fikambanana politika niatrika fifidianana loholona farany teo. Nanao antso fanairana sy nampaneno lakolosy izy ireo.
« Tokony henjehina sy hosaziana ireo nanao hosoka fa mbola hanao ny ataony ireo amin’ny fifidianana manaraka eo ary hanao ny ratsy kokoa noho ireny », hoy ny solontenan’ny kandidà Beriziky Omer, avy amin’ny Mamimad tamin’ny alalan’i Jean Yves, omaly tetsy Antaninarenina. Tsy vitan’izany fa ankamehana ny fikarakarana iny fifidianana iny. Efa andro vitsy mialoha vao navoaka, tsy araka ny lalàna ny lisitry ny mpifidy araka ny nambarany. « Tsy nisy ny eftrano fisainana… Nandeha avokoa ny fanamparam-pahefana sy ny teritery samihafa… Tsy hita amin’ny valin-tenin’ny HCC ny fepetra tokony horaisina manoloana ireo fitoriana marobe », hoy ihany izy.
Nohitsiny fa tsy tokony haorina amin’ny tsy ara-dalàna tahaka sy ny tsy fanajana lalàna ny andrimpanjakana.
Mitaky valin-teny mazava amin’ny HCC ny MMM
Ho an’ny Malagasy miara-miainga (MMM) kosa, mitaky ny valin-teny avy etsy Ambohidahy momba ny fitoriana nataony izy ireo. « Tokony hanome valiny mazava ny HCC na manana ny marina izahay na tsia. Tsy olana aminay ny fomba ilazany azy saingy tsy noraharahana izany », hoy ny kandidà loholona, Ratsihoarana Andriamalala.
Etsy andaniny, mazava ny an’ny fikambanana Marina. Tokony hanaovana atrikasa tombana iny fifidianana loholona iny. « Ho mpandray anjara avokoa ny kandidà teo sy ny Ceni, mpikarakara fifidianana. Eo koa ny minisiteran’ny Atitany sy ny HCC hitondra ny heviny sy ny antontan-taratasiny… Ahafahana manatsara ny fifidianana mbola hatao sy handraisana fanapahan-kevitra koa izany. Tsy misy antony hanaovana fifidianana raha tahaka izao hatrany », hoy izy.
Ho an’ny Mapar, tsy maintsy miteny izy ireo mialoha ny hiatrehana ny fifidianana atsy ho atsy.